नेपाल आइडलको गाला राउण्डमा पुग्न सफल पवन गिरी को हुन? – Waikhari
गृहपृष्ठ मनोरञ्जन नेपाल आइडलको गाला राउण्डमा पुग्न सफल पवन गिरी को हुन?
नेपाल आइडलको गाला राउण्डमा पुग्न सफल पवन गिरी को हुन?
दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा जन्मेर काठमाडौको शंकरदेब क्याम्पसमा स्नातक तह अन्तिव वर्षमा अध्ययनरत पवन गिरि आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउन नेपाल आईडल सिजन टु मा सहभागी भएका छन् ।
गिरीलाई सानैदेखी गायन, लेखन, संगीतमा रुची थियो । तर उनले पारिवारिक समस्या , नाजुक आर्थिक स्थितिका कारणले आफ्नो कला बाहिर प्रस्तुत गर्ने उचित वातावरण पाएनन् । संगित सिक्ने मन हुदाँ हुँदै पनि उनले सिक्न सकेनन् । सानैदेखी गायक बन्ने सपना बोकेका उनलाई अहिले एपीवानमा संचालन भईरहेका नेपाल आईडल उनको क्षमता देखाउने फोरम बनेको छ । उनी उत्कृष्ठ 11 अर्थात गाला राउण्डमा पर्न सफल भएका छन् ।
उनी विशेष गरि बेस्टन ज्याज टाईपको गीत गाउन रुचाउँछन् । पर्याप्त मात्रामा संगित सिक्नको लागी नसकेपनि पछिल्लो दुई वर्ष यता उनी संगितसंग आवद्ध हुन थालेका छन् । उनी कहिलेकाही आफ्नो चाहाना पुरा गर्न तथा पकेट खर्च जुटाउनका लागी आफुले चिनेका साथीहरुसंग कहिलेकाही ठमेलका क्लबहरुमा गएर गित गाउने गर्दछन् ।
उनका बाबु भिम बहादुर गिरी आरआर क्याम्पसमा पालेको काम गर्दछन् । पालेको काम गरेर जिविको पार्जन गर्ने गिरी परिवारले पवनलाई उनको ईच्छा अनुसार परिवारले संगित सिकाउन सकेनन् । पवन अहिले आफै खर्च जुर्टार संगित सिक्न थालेका छन् । उनले आफ्नो क्षमता नेपाल आईडलमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बच्चा देखीको गायक बन्ने सपना पुरा गर्न उनी नेपाल आईडलमा सहभागी भएका छन् । उनी नेपाल आईडल जितेर आफ्नो सपना पुरा गर्न चाहान्छन् । उनले सबैलाई नेपाल आईडलमा आफ्नो प्रस्तुतीलाई हेरेर भोट गरि सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
दसैँ लाग्दा देशैभरका स्टेज कार्यक्रममा नेपाली कलाकार व्यस्त
आज महाअष्टमी : कालरात्रिको पूजा गरिंदै
रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगलको शानदार जीत
सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
दशैँ घरमा फूलपाती भित्र्याइयो
कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य संघद्धारा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
एमाले त्यागेका जोशीले पाए एकीकृत समाजवादी स्थायी कमिटीको जिम्मेवारी
तत्कालै चुनावमा जानुको विकल्प छैन्- कांग्रेस नेता सिंह
बर्दियामा वर्षासहितको हावाहुरीले लाखौंको केराखेती नष्ट